TSY FANDRIAMPAHALEMANA AO BETANATANA : Nitroatra ny mponina, leo amin’ny asan-dahalo
Nitroatra ny vahoakan’i Betanatana sy Ankisatry noho ny firongatry ny asan-dahalo ao amin’izy ireo, ka nanao rodobe niakatra ao an-tampon-tanànan’i Maintirano renivohitr’i Melaky, omaly maraina. 7 juin 2018
Nitety ny biraom-panjakana ao an-toerana izy ireo, omaly, nanao fanairana manoloana ny zava-misy any amin’ny kaominina misy ireo mponina. Saika efa ho isan’andro ny asan-dahalo sy halatr’omby ao amin’ireo kaominina ambanivohitr’i Maintirano ireo, raha ny fampitam-baovao voaray ka izany indrindra no nampihetsika ireto farany. Miha lany ny omby ao amin’ ireo kaominina lasibatra ireo, mihorohoro sady mandry tsy lavoloha ny mponina noho ny asan-dahalo mahery vaika.
Mahazo vahana mihitsy ny tsy fandriampahalemana ao amin’ny distrikan’i Maintirano iny tato ho ato. Tsy nisalasala kosa ireo tompon’andraiki-panjakana ao Maintirano fa nihaino sy nandray ireto vahoaka sahirana. Tsy niandry ela fa omaly antoandro dia nanatanteraka fivoriambe niarahana tamin’ny tompon’andraiki-panjakana miandraikitra mivantana ity tranga ity ny mpitandro filaminana sy ny vahoaka. Tamin’ny fotoana nanoratanay dia mbola tsy vita ny fivoriana, noho izany mbola tsy fantatra ny valan-dresaka na ny fifanarahan’ ny roa tonta.
Zazavavy maty natelin’ny renirano ny alahady 22 novambra lasa teo BEFOTAKA AVARATRA (335) 24 novembre 2020 Sarona ireo teti-dratsy goavana vitan’i Prudence FISOLOKIANA AO AMIN’NY FACEBOOK (172) 26 novembre 2020 Zanany sy zafikeliny ihany no nahafaty an’ilay pasitera FANAFIHANA TAO MIARINARIVO (160) 24 novembre 2020 Ben’ny tanàna teo aloha tratra anolana zazavavy tsy ampy taona ANTOBY- MIARINARIVO (114) 26 novembre 2020 Liana amin’ny fampandrosoana imasoan’ny Fitondrana ankehitriny BEN’NY TANANA TIM (86) 24 novembre 2020 « Ahiana ny mety hisian’ ny kolikoly », hoy ny Kmf/Cnoe LOHOLONA (82) 24 novembre 2020